8 Calaamadood Oo Aad Ku Garan Karto Marka Gabadha Ay Ku Nici Rabto - Aayaha
Kala tagga ama furriinka kadib, qof kasta wuxuu rajeeyaa inuu arko markii ay arimahaas soo socdeen ama dhici rabeen.
Hal xaqiiqo oo ku saabsan furiinka ama kala tagga ayaa ah inaysan si dhaqsi ah u dhicin; waa qorshe tartiib tartiib ah iyadoo haweeneyda ay lasoo bixi karto calaamadahan iyadoo aanan ogeyn.
Hoos ka akhriso 8 calaamadood oo lagu garto marka haweeneyda ay ku nici rabto.
Waxaa tahay qofka ugu dambeeya ee ogaada waxyaabaha kusoo kordhay nolosheeda
Hal tilmaan oo ku tuseysa in lagu nici rabo ayaa ah marka had iyo jeer noqoto qofka ugu dambeeya ee ogaada waxyaabaha ku dhacaya nolosheeda ama isbedelada ku yimaada nolosheeda.
Tani waxay ku tusineysaa inaad tahay qof aanan muhiim u ahayn isla markaana aadan u xisaabsaneyn.
Si fiican ugama soo jawaabto fariimahaaga macaan
Haddii aad u dirto fariimo macaan oo kalgaceyl xambaarsan isla markaana ay kuugu soo jawaabto oo kale “mahadsanid” waxaa laga yaabaa inaad jahwareerineyso iyadana ay ku fikireyso inay ku tuurto.
Waxay joojisaa inay ku dhahdo haye iyadoo isticmaasha “Waa laga yaabaa”
Waad ogtahay inay daaqada kaa saari rabto hadii ay si kadis ah uga jawaabto codsiyadaada “malaha” ama “waanu arki doonnaa” inteey oran lahayd “haa”.
Waxay markaas si dadban u bilawday in ku diido iyadoo aanan si toos ah kuugu oraneyn kuma rabo. Balse ninka ragga ah waxaa laga doonayaa inuu garasho yeesho isla markaana uu fahmi karo qofta rabta iyo tan aanan rabin.
Waxay si lama filaana u jartaa qof kasta oo kuu dhow
Haddii aad aragto inay xiriirka u jareyso qof kasta oo isku xira labadiina sida qoyskaaga ama saaxiibadaa, waxaad ogaataa inay ku nici rabto.
Waxay joojisaa kaftankaaga iyo inay kula qososho
Marka haweeney ay ku nici rabto waxay si lama filaan ah u joojisaa inay kula kaftanto ama ay kula qososho.
Kaftankaaga wuxuu u noqdaa mid aanan dhadhan iyo maadba leheyn.
Raaxada oo yaraata
Noloshiina dhanka raaxada ayaa ku siin karta caddeyn haddii ay haweeneyda ku nici rabto. Marka haweeneyda ay tuuri rabto nin waxay si lama filaan ah u bilaawdaa inay iska ilaaliso inuu sariirta kula kulmo.
Xittaa marka ay la kulanto, kulankaas waa mid caajis ah oo aanan xamaasad lahayn.
Maseerka oo Meesha ka baxo
Way iska cadahay in dadkoo dhan uu galo maser yar marka ay jecelyihiin qof. Haddii ay si kadis ah u joojiso inay daneyso waxaad la sameyso haweenka kale markaas waqtigaagi ayaa dhamaaday.
Waxay bilaawdaa inay hilmaamto waxyaabaha ku quseeya
Haddii ay bilaawdo inay hilmaanto waxyaabaha ku quseeya, taasi waa calaamad muujineysa inay ku nici rabto. Marka qof uu si dhab ah u jecelyahay qof kale waligiis ma hilmaamo waxyaabaha qofkaas quseeya.
5 Qaabood Oo Haweeney Kasta Ay Ninkeeda Uga Heleyso Ixtiraam